Ny zava-misy amin'ny kristaly safira | Vaovao IPhone
Carmen rodriguez | | About us
Betsaka ny tatitra milaza fa misy tombony ny vera safira noho ny Gorilla Glass, saika ny mifanohitra amin'izany no izy. Fotoana izao mametraha fanontaniana ary mahazo valiny mivantana.
Amin'izao fotoana izao, ny kristaly safira tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny ampahany kely amin'ny iPhone, manokana amin'ny vera miaro an'ny fakan-tsarin'ny fakantsary an'ny iPhone 5s, sy ny Touch ID. Na izany aza, ny mpandinika dia miandrandra fisondrotana be ny fangatahana an'ity fitaovana ity.
Apple dia nanambara tamin'ny faran'ny 2013 fa mikasa ny hanokatra a famokarana kristaly sapira any Arizona, izay hampiasa olona 700, ary afaka mamokatra eo anelanelany 100 sy 200 tapitrisa iPhones isan-taona. GT Advanced Technologies Izy no tompon'andraikitra amin'ny fampandehanana ireo fatana sy fitaovana ilaina.
2 Ny lanja sy ny hateviny
4 Fampiharana teo aloha
Ny fikirizana sy ny faharetana no tena antony italianan'ny Apple amin'ny kristaly safira. Amin'ny ambaratonga henjana, ny zavatra tokana mafy noho ny safira dia ny diamondra. Ny dikan'izany dia ny fanoherana mahatohitra azy, na amin'ny fotoana anaovany azy fanombohana volo toy ny fanoherana vantany vao manomboka ny triatra voalohany. Ny fanoherana ny vaky dia avo 4 heny noho ny an'ny Gorilla Glass.
Aero-Gear nanao fitsapana misintona andiana beton, mihoatra ny iPhone misy fiarovana kristaly safira, ary ny vokany dia tsy nahavita naoty tokana amin'ny fitaovana.
Ny lanja sy ny hateviny
Ny kristaly safira dia a 67 isan-jato mavesatra kokoa noho Gorilla Glass, ary manana hakitroky ny 3,98 g / cm3 raha ampitahaina amin'ny 2,54 g / cm3 ampiasaina amin'ny fitaovana iOS efa misy.
Apple mety manana fahasarotana amin'ny fahazoana ny hateviny mitovy amin'ny kristaly safira, raha sanatria ka misafidy ny hisolo tanteraka ny Gorilla Glass ianao. Raha ny marina, Gorilla Glass dia manana hatevina totalin'ny 0,55mm ao anatin'izany ny fametahana adhesive, ny vera safira dia 0,6mm matevina ao anatin'izany ny adhesive mamatotra. Araka ny hitantsika ny mahasamihafa azy roa dia 0,05 milimetatra, ny mitovy amin'ny volon'olombelona.
Ny olana goavana dia tsy miraharaha ny patanty Apple vao tsy ela akory izay mamaritra ny a fomba hafa fanapahana amin'ny ravina safira tena tsara mampiasa laser indostrialy.
Ny fanamboarana ny ny vera mahazatra dia dingana tsy dia lafo loatra. Gorilla Glass dia manampy ny vidin'ny fizotry ny simika fanampiny izay manamafy ny vera.
Ny kristaly safira dia vita amin'ny mineraly kolontsaina ao anaty lafaoro. Rehefa esorina ireo fitaovana vokatr'izany dia hita ao anaty sakana lehibe antsoina hoe "boule" izy, avy eo ny laser manapaka ny safira amin'ny habe takiana. Tsy ny vidiny ihany, fa ny fahasarotana sy ny faharetan'ny fizotrany, izay mahatonga ny safira kristaly ny lafo indrindra hatreto.
Na ny famokarana safira amin'ny habetsahana takin'i Apple aza dia midika fa ny sandan'ny famokarana dia telo ka hatramin'ny efatra heny lehibe kokoa mankany amin'ny Gorilla Glass.
Fampiharana teo aloha
Ny kristaly safira dia misy ao amin'ny famantaranandro antonony sy avo lenta, Raha ny fitaratra dia nampiasain'ny mpanao famantaranandro nandritra ny taona maro, safira no be mpitia ankehitriny noho ny fanoherany ireo singa.
Anisan'izany ny fampiasana safira mahazatra mpamaky semiconductor sy barcode, izay safira safira nohon'ny fahamendrehany. Ao amin'ny avionika, noho ny fahafahany miaritra ny hafanana tafahoatra sy ny fanoherana azy. Ao amin'ny lohan'ny optika an'ny zana-tsipìka ary toy ny mifanohitra amin'ny vahaolana bala.
Mazava ho azy ny tombony amin'ny maha fitaovana azy, ny lafiny ratsy fotsiny dia ny hateviny, izay efa naroson'ilay vahaolana miaraka amin'ilay patanty voalaza etsy ambony, sy ny lanjany, izay raha ahena ny hateviny, dia tsy hanana ilay olana intsony isika.
Raha ny momba an'i Apple dia fomba iray hafa mankany manavaka avy amin'ny fifaninanana ary firaka tsy ny teknolojia ihany, fa ny sehatry ny injeniera ara-pitaovana, farafaharatsiny ampiasaina. Ny tena olana dia mipoitra rehefa miresaka momba ny vidiny isika.
Raha misy iPhone misy efijery safira vita, Iza no mihevitra ny fandaniana fanampiny? Hofoanan'i Apple ve ny sasany amin'ny tombom-barotra isaky ny singa amidy hividianana vola? Mety ve raha torohevitra roa no manaitaitra, farafaharatsiny ny iray tsy manana safira ary mora vidy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny zava-misy amin'ny kristaly safira
Apple dia mieritreritra ny hanavao, tsy mbola nieritreritra ny hanao zavatra mora vidy kokoa izy ireo, ny 5c dia andrana, tsy mora vidy mihitsy ... noho izany ny maha-zava-dehibe ny fampisehoana marika. Mbola tsy nanana iPhone aho noho ny vidiny lafo 🙁
Tsy ny fanaovana ny terminal mora vidy kokoa, fa mihevitra ny ampahany amin'ny vidin'ny famokarana fanampiny ao anatin'ny isan-jaton'ny tombom-barotra. Eritrereto fa mbola mitohy any Eraopa ny krizy ary tsy afaka mandoa mihoatra noho izay andoavantsika iPhone izahay izao. Araka ny voalazanao, ny sasany amintsika tsy afaka mividy izany ankehitriny ary manana kinova taloha izahay.
Dreyius dia hoy izy:
Carmen, arahaba soa amin'ny lahatsoratra. Nanoratra fanamarihana maromaro momba ny lahatsoratrareo izay tsy tiako loatra aho ary hitako ny lalàna miarahaba anao amin'izany. Manantena aho fa hitohy amin'ity andalana ity ny bilaogy. Mirary ny soa indrindra.
Valiny tamin'i Dreyius
Misaotra Faly aho fa nahaliana anao izany.
Ignacio Herrero dia hoy izy:
Avy eo apetrakao ao am-paosinao izy io, izay anananao ny sombin-tany feno vovoka ary manidy ny efijery… ary raha ampandalovinao amin'ny vodin-tsandrinao izy dia tsy hanao zavatra aminy ...
Mamaly an'i Ignacio Herrero
Ignacio, raha tsy voarangotra visy, raha tsy diamondra ny sombin-vovoka ao am-paosinao, dia heveriko fa tsy afaka mamaky ilay efijery izy io raha vita amin'ny vera sapira.
Fanamarihana; raha manana vovoka diamondra ao anaty pataloha ianao ... tandremo! manana harena be ianao..XD
Heveriko fa noho ny Gorilla Glass izay fantatra fa mahatohitra maranitra no ilazanao azy, saingy mora tohina amin'ny vovoka.
pb8 dia hoy izy:
Izaho irery ve no mieritreritra fa ny efijery safira sy ilay zavamaniry kasainao hosokafana manokana ho an'ity fitaovana ity dia mankany amin'ny iWatch ho avy fa tsy ny iPhone? Farafaharatsiny farafaharatsiny ... Mety hisy dikany kokoa satria ny "famantaranandro" dia miharihary kokoa amin'ny rangotra, fipoahana, vovoka sns sns noho ny iPhone izay entin'ny ankamaroan'ny olona (tsy) ataoko ary apetraka ao am-paosiny foana Mitovy ??? Ho fanampin'izay, saika ny famantaranandro afovoany rehetra dia efa manana kristaly safira, koa tsy ho fanavaozana tanteraka izany.
Valio ny pb8
Eny, ny marina dia heveriko ihany koa fa farafaharatsiny aloha ny orinasa dia hitodika bebe kokoa hanome ny fitaovana ho an'ny id id ary angamba ho an'ny fametahana hypothèque, fa amin'ny ho avy dia tsy mitombina ny mieritreritra fa azo ampiasaina io. manolo na manandrana amin'ny fampisehoana safira amin'ny terminal ho avy. 😉
Ny ho avy (> 5 taona) dia tokony ho efijery graphene, mandehana amin'izany.
Tsy mitovy ny hevitro, jereo ny vaovao "Canonical dia manamafy fa nividy enta-mavesatra nandritra ny 3 taona ny efijery safira 4,5-inch" i Apple, navoaka ora vitsivitsy taorian'io ary tonga dia noferany fa "manana safira be loatra" i Apple , Misy tatitra hafa milaza fa mitovy ny fifanarahan'ny orinasa China…. fitaovana sy mpanamboatra be loatra ho an'ny iPhone fotsiny ..
Tsy lazaina intsony fa tsy mitovy ny vidin'ny efijery iPhone misy 4 "na mihoatra ny iray amin'ny iWatch ho avy 1,5" na 2 ", mihevitra fa efamira fa tsy NikeFuelband karazana
Ahoana ny fomba hamoronana hetsika mandroso amin'ny Launch Center Pro ho an'ny iPhone